Maleeshiyo beeleed Adeegsiga Aano qabiil ku laayay Qoys dhan gobolka Mudug – SBC
Maleeshiyo beeleed Adeegsiga Aano qabiil ku laayay Qoys dhan gobolka Mudug
Xoolo dhaqato ku dhaqnaa deegaan ku yaala gobolkaasi Mudug kana tirsan Maamulka Galmudug ayaa habeen nimadii xalay col galay, waxaana kooxo dabley ah ay laayeen Qoys xoolo dhaqatada kamid ahaa.
Ku dhowaad 8 qof oo uu qof qura ka nool yahay ayaa kooxdaasi dableyda ah weerarka ku laayeen, waxaana ku jiray Aabihii iyo Hooyadii Qoyskaasi.
Sida ay ku soo waramayaan wariye yaasha SBC ee gobolkaasi Mudug dhacdadan ayaa noqotay mid ay ka nexeen dadka ku dhaqan deegaanada gobolka iyagoona cambaareyn kulul ujeediyay dableyda falkaas geystay.
Dhacdadan waxay qeyb ka tahay falalka aanooyinka Qabiil oo mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanada gobolkaas ku soo kordhayay, inkastoo la sheegay in falkan ay geysteen maleeshiyo beeleed ka yimid dhanka deegaanada Maamulka Ximin iyo xeeb .
Odayaal iyo waxgarad ka tirsan kuwa deegaanka ay Dhibaatado ka dhacday oo lagu magacaabo Laba ceel ayaa hadal ay saxaafada siiyeen ku sheegay in dabagal ay ku sameeyeen maleeshiyaadkaasi ay ku cadaatay in ay ka yimaadeen dhanka degmada cadaado Maamulka Ximin iyo xeeb.